​मिल्नु र मिलाउनु « Jana Aastha News Online
​मिल्नु र मिलाउनु
प्रकाशित मिति : २६ माघ २०७४, शुक्रबार १३:४२
दरबारमार्गको प्रहरीलाई के दशा लाग्या हो कुन्नि, एउटा यौनकाण्डले साह्रै घुमाइदियो । यौनकाण्ड पनि कस्तो भने अहिलेसम्म यो बलात्कार हो कि राजीखुशी हो ठम्याउन मुश्किल । कहिले यो बलात्कार बन्छ । कहिले राजीखुशी । स्थिति यहाँसम्म पुगिसक्यो कि यही काण्डमा परेर प्रहरीका हाकिमहरू भकाभक निलम्बनमा पर्न थालिसके तर काण्ड वास्तवमा के हो पत्ता लगाउन सकिएको छैन ।
यसमा बिचरा प्रहरीको पनि के दोष ! प्रहरीले त दुईटा पक्षलाई सँगै राखेर मिलाउने हो । मिलाउनु भनेको राम्रै काम हो । छुट्याउनु वा झगडा गराउनु पो नराम्रो । मिल्नु र मिलाउनु भनेको जे पनि राम्रो । अस्ति चुनावमा हेर्नोस्, एमाले र माओवादी मिलेपछि कति राम्रो भयो । संसारमा सबैतिर यसै गरी सबै जना मिलेको भए कति राम्रो हुन्थ्यो । भारत र पाकिस्तान मिलेको भए कति राम्रो हुन्थ्यो । उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरिया मिलेको भए कति राम्रो हुन्थ्यो । नमिलेरै सबै कुरा बिग्रेको त हो नि !
तर, दरबारमार्ग प्रहरीलाई चाहिँ के दशा लाग्या हो कुन्नि, उल्टो मिलाएर पो नराम्रो भएछ । बलात्कृत महिला र बलात्कारी पुरुष दुवैलाई मिलाउने काम प्रहरीले गरेको थियो । त्यो पनि आफ्नै रोहवरमा । पण्डित उपलब्ध भएको भए झण्डै चौकीमै बिहेसमेत गराइदिने तयारी थियो । तर, यो सतीले सरापेको देशमा राम्रो गर्नेको के दशा भयो हेर्नोस् त, झन् मिलाउने प्रहरीलाई उल्टो कारबाही गरिँदै छ ।
साला ! कहिलेकाहीं मिल्नु र मिलाउनु पनि अपराधै हुँदो रहेछ कि क्या हो ? जय नेपाल !